प्रधानमन्त्रीका आँखाले पनि यी कुरा पढून् - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
गत साता साप्ताहिकको युवा मन स्तम्भमा सुबिन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेका थिए । उक्त लेखमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभिन्न अपेक्षा व्यक्त गर्नुका साथै केही गुनासो समेत गरेका थिए । उक्त लेखमा प्राप्त टिप्पणीहरू :
मनकै कुरा भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
तपाईंकै जस्तो सोच हाम्रो देशको सरकारको पनि भैदिए हुन्थ्यो नि ।
एकदम सही कुरा । प्रधानमन्त्रीका आँखाले पनि यी कुरा पढून् र सुकर्ममा लाग्न सक्नुहोस् ।
मेरो मात्र होइन, आफ्नो मात्र होइन । हामी सबैको सोच, विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै लेख्नुहोला । त्यो पनि मीठो शैलीमा– मनैदेखि नमन ।
यो कुरामा जोडदार समर्थन, तर रेल र जहाजको गफ गर्नुभन्दा पहिले बाटोको राम्रो व्यवस्था होस् । देशकै बेइज्जत गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापक सुधार आओस् । सरकारले अरू कुरामा अल्झिनुभन्दा देश र जनताले महसुस गर्ने गरी विकासको मूल फुटाउनुपर्‍यो ।
स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्नुको अर्थ तँ फोहोर गर म प्रधानमन्त्री आफैं आएर टिप्छु भनेको होइन ? सडक मिचेर आफूले घर बनाउने, बाटो विस्तार गर्न अवैध घर भत्काउँदा धूलो उड्यो भनेर सरकारसँग रिस पोख्ने ? सरकारले सडकछेउ रोपेका फूल र रूखमा एक गिलास पानी नहाल्ने, उस्तै परे कुल्चिएर हिंड्ने वा भाँचेर फालिदिने, अनि ए सरकार हरियाली दे भनेर हुन्छ ? जनता नसुध्रिएसम्म सरकार कसरी सुध्रिन्छ ?
सबैले आफूलाई ऐनामा हेर्नुपर्छ । एकतर्फी रूपमा मात्र हेरेर हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अरू केही अपेक्षा छैन, देशको विकास, शान्ति तथा सुरक्षा चाहियो ।
सक्षमहरूले सही बाटो समाउँछन् र सही काम गर्छन् । असक्षमहरू डाहा गर्छन् अनि मोटो बुद्धि देखाउँदै उफ्रिरहन्छन् ।
यहाँको भनाइमा सहमत हुँदै सलाम गर्छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, अब देशमा गलत धन्दा गर्नेहरूलाई नेपालबाट भगाउनु पर्छ ।
अब नेपालमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । देशको विकास हुनुपर्छ । भाषणले मात्र देश बन्दैन ।
अब देश विकास होला कि जस्तो लागिरहेको छ । अब नेपाली जनता धनी हुने भए ।
मुखले भनेर मात्र हुँदैन । गरेर पनि देखाउनुपर्‍यो ।
रेल कुदेर, पानीजहाज चढेर समृद्धि आउँछ ? हामिलाई चाहिएको सबै नेपालिको समृद्धि हो धनी र हुनेखानेहरूका लागि मात्र होइन ।
हावाबाट बिजुली निस्किसक्यो । सबैले घर–घरमा पाइपलाइनको ग्याँसबाट खाना पकाउँछन् । अब रेल पनि कुद्ने भयो । नेपालमा केपी ओली सरकारले सार्‍है विकास गरेको छ ।